Nanjary mora ny fandikana ny fiteny: Dikanteny iray ora | Martech Zone
Natao mora ny fandikana ny fiteny: Dikanteny iray ora
Alarobia, Jolay 31, 2013 Douglas Karr
Betsaka amin'ny mpamaky antsika no nanontany raha mahafantatra serivisy fandikan-teny tsara amin'ny Internet isika na tsia. Izahay dia mpiara-miasa amin'i Fandikana iray ora, serivisy mpandika teny matihanina amin'ny Internet. Ny fandikan-teny dia ataon'ny vondrom-piarahamonina mpandika teny maherin'ny 10,000 manerantany amin'ny alàlan'ny tranonkalan'ny One Hour Translation, na ny serivisy fandikana mailaka ataon'izy ireo.
Fampiasana ny Fandikana iray ora cloud na ny fandikan-tenin'izy ireo API, ny mpanjifa dia afaka mahazo tombony amin'ny fihenan'ny vidin'ny fandikan-teny amin'ny alàlan'ny fifantohana ireo mpandika teny ao an-trano amin'ny asa avo lenta ary ny fahazoana tolotra fandikana haingana 24/7. Ny One Hour Translation dia afaka manokana mpandika teny izay mampiasa fitadidiana fandikan-teny, Trado na fitaovana hafa, ary manaraka ny fenitra sy ny torolàlana momba ny fandikan-teny.
Ny One Hour Translation dia manana tolotra manokana ihany koa masoivoho mpandika teny.
Fikarohana sy karama ara-tsosialy
1 Aogositra 2013 amin'ny 3:38 PM
Tena ara-dalàna ve izany? Tena mahafinaritra izany!